Ukophula iminyaka engama-50 yesiko, i-InverPad yiteknoloji yoqobo eyaphuhliswa nguAkark. Ngokudityaniswa ngokugqibeleleyo koyilo lwePad, i-Stepless-DC-Inverter kunye netekhnoloji yokulwa nengxolo, iphucula amava okuqubha kwinqanaba elitsha.
Nandipha Ukuthula Ngokwenene
Kumgama we-1 yeemitha, amava esandi asezantsi njenge:
36.5dB (A)Indlela yokuthula
46dB (A)Indlela yokuNyusa
STEPLESS DC NGAPHANDLE
I-Inverter ye-DC engahambanga ivumela i-compressor ukuba ihlengahlengise isantya ngokusekelwe kwizona mfuno kunye neemeko. Imvamisa kunye ne-RPM inokuhlengahlengiswa ngokukodwa ukuze inikezele ukusebenza okumangalisayo kokugcina amandla kunye nokuthula okugqithisileyo.
I-InverMax yoThengiso lwePhuli yokuTshisa isixhobo sokuPhunga i-60 / 110kw
I-AquaMini-IPhuli yokushisa ubushushu
Jonga ukuba kwenzeka ntoni ngathi!
Thu-Jun-2021 Funda ngokugqithisileyo
Fri-May-2021 Funda ngokugqithisileyo
Mon-Mar-2021 Funda ngokugqithisileyo
“Siye sakonyusa ukuthengisa kwethu ngepompo yokushisa ngesibulelo esi-3 ngokubulela uMnu. Xa abathengi beyibona kwigumbi lethu lokubonisa, bayachukunyiswa yimeko yayo encomekayo yealuminium. Ke kufuneka bayivile ukuze baqiniseke ukuba yimveliso elungileyo. Sifanele ...
“Abathengisi beKerex baseHungary kunye nabathengi abasele benomnumzana uSilence bayayithanda indlela eyilwe ngayo. Ijongeka ngathi yeyokudlalisa kwiholo yekonsathi! Yintoni emangazayo kwaye eyahlukileyo imveliso kwabo bakhuphisana nabo kukusebenza okuthe cwaka ...